Lany ny volavolan-dalàna:ONERANA IREO OLONA VOA HATRAMIN’NY 2002 -
AccueilRaharaham-pirenenaLany ny volavolan-dalàna:ONERANA IREO OLONA VOA HATRAMIN’NY 2002
Betsaka ny fanitsiana saika ataon’ny depiote momba ny volavolan-dalàna mikasika ny fampihavanam-pirenena omaly saingy tsy tontosa hatrany amin’ny fandaniana azy izany. Niteraka adihevitra be ny hoe raha toa ka onerana avokoa ireo olona voa tamin’ireny fihetseham-bahoaka ireny dia tokony ho natomboka hatrany amin’ny fotoana nahazoana ny fahaleovantena, na ny talohan’izay mihitsy aza. Tsy nanaiky izany anefa ny governemanta satria ny namolavolana ny lalàna dia niainga tamin’ireo fakan-kevitra be dia be natao hatramin’ny taona 2010 no nankaty. Nisy ny nilaza fa tokony ho esorina ny voa tamin’ny 2002, izay voamarika ao anatin’ny andininy faha-13 sy faha-47. Tsy neken’ny rehetra anefa izany. Rehefa natao ny tsangan-tanana dia lany ary tsy nisy nahitsy ny volavolan-dalàna N°010-2016 tamin’ny 20 Mey 2016 mikasika ny fampihavanam-pirenena. Voailika avokoa araka izany ireo fanitsiana saika noheverin’ireo depiote sasany atao. Tafiditra ao anatin’io izany ny raharaha 2002 ka hatramin’ny faran’ny Tetezamita.
Betsaka ireo mbola tsy nahafeno taratasy
Ny depiote mpomba ny fitondrana moa no betsaka nandany azy ity. Farafahakeliny dia mahatratra 350 ny antotan-taratasy efa voarain’ny komity manokana mikarakara ity fampihavanam-pirenena ity. Mbola betsaka ny olona tsy nahafeno ny atontan-taratasiny hahafahana manonitra azy ka nanao antso avo ireo tompon’andraikitra mba samy hameno izany antontan-taratasy izany avokoa. Efa nisy ny vola natokana hanaovana izany fanonerana izany ary ireo komity manokana mikarakara izany dia efa tsy mitsahatra ny manao ny fijerena an’ireo atontan-taratasy ireo sao dia misy tsy mifanaraka amin’ny zavatra takiana hanomezana ny vola. Matoa izany nisy ny fahalanian’ity volavolan-dalàna ity dia satria efa teo ny fahavononan’ny fitondrana ankehitriny hanome fahafaham-po ny olona voa tamin’ireny raharaha politika nitranga teto amin’ny firenena ireny. Tsy hoe hahavita ny famafana ny ratra akory izany fa mba tahaka ny fehim-pihavanana maha Malagasy sy hanaovana ny fampihavanam-pirenena izany.
Kung-fu wisa : Mampitandrina ireo mikasa hamboly korontana
Mitohy hatrany ny fankalazana ny faha-38 taonan’ny kung-fu wisa malagasy. Taorian’i Vakinankaratra sy Bongolava, dia nahazo ny anjarany ihany koa Analamanga. Araka izany, nanatanteraka fihaonambe ny faran’ny herinandro teo tetsy Ampefiloha ny avy amin’ny kung-fu ...Tohiny